nuqulo Dibadda - Transfer of credits documentary waddan kale | USAHello | USAHello
wadanka kastaa wuxuu leeyahay nidaam waxbarasho ee kala duwan. laga yaabaa in aadan awoodin in ay guriga ka isticmaasho degree marka aad guurto. Baro sida aad nuqul shisheeye ee qiimaynta waxaad isticmaali kartaa karin waxbarashada hore ee dalka Mareykanka
Haddii aad rabto in aad bilowdo waxbarasho oo dalka Mareykanka ah, aad u baahan tahay si ay u muujiyaan waxbarashada aad heshay ee dalka. Waxaad weydiisan kartaa in aad milkiilayaasha shaqada waxbarashada ayaa sidoo kale. Waxaad u baahan doontaa in la qiimeeyo diiwaanka shisheeye. Laakiin xataa haddii aad leedahay shahaado ama digrii ee dalka, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay qaataan fasallo dheeraad ah ama baadhitaano si shaqada ee shaqada jirka ah.
Waxaad ogaado erayada
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah erayada waxtar leh ay tahay in la fahmo marka ay ka hadlayaan qoraalka shisheeye:
Nuqul ee asalka ah - saxan Wargeyska ayaa ku taxan saf ka helay dugsiga sare ama jaamacadda. Dadka intooda badan ka heli iyaga ka dib markii qalin jebinta. sida caadiga ah Waxaad codsan kartaa in qoraalka dheeraad ah shisheeye ka dugsiga.
Qiimeynta Waxbarashada - qiimaynta Waxbarashada waxaa ay sameeyeen shirkadaha turjumi aad qoraalka iyo aad raadineyso weeyna. Waxaa la go'aamiyey in waxbarashada aad heshay ee dalka waa isku mid ama la mid ah oo dalka Mareykanka ah.
Acredits School waxaa loo isticmaalaa in dugsiyada American iyo nidaamka jaamacadaha Aatmadia (credit). qoondeymaha - lambarada A waxaa loo xilsaaray in ay dabcan fasalka ama tababar kasta. Sida caadiga ah, fasalada u 2-3 credits. Ka hor inta aadan u qalin jebiyaan, aad leedahay si aad u hesho a total credits qaarkood.
degree - degree Sayniska waa shahaado ka jaamacad ama kulliyad.
Goorma iyo sidee ay u helaan nuqul ka mid ah qiimeynta diiwaanka shisheeye
Haddii aad raadineyso weeyna shaqo la'aan xirfadaha, ma laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u caddeeyaan waxbarashadaada. Cagaha shaqo qaar ka mid ah oo la ogaado bal inay ka codsanaynaa in aad nuqul shisheeye. Sidoo kale, qaar ka mid ah shaqooyinka bixin dheeraad ah haddii aad haysato shahaadada ama kulliyadda shahaadada dugsiga sare a. Haddii aad u baahan tahay si ay u qiimeeyaan ma diiwaanka shisheeye, waxay ku siin kartaa cadadka lacagta qiimeynta.
Haddii aad siiso shaqo ama xirfad, waa in aad si xaqiiqo ah u heshid qiimeynta aad degree. Bilaabaan isla markiiba raadiyo shaqo sababta oo ah waxa laga yaabaa inay qaadato muddo dheer.
First, aad u hesho replica ka mid ah dugsiga. Oo markaas iyaga soo gudbiyaan si ay u qiimeeyaan koobi shirkadda. Sida caadiga ah, waxaa jira laba nooc oo ah qiimaynta:
Qiimeynta kala go'idda ama wareegga wareegga
deggan Text u muuqataa in nuqulo shisheeye si ay u arkaan saf oo dhan qaaday mid mid. Waxay jeclaan lahaa inuu arko haddii ay fasalka in aad ka dhigay mid yihiin kuwa loo baahan yahay in Maraykanka. Waxaa loo sameeyaa marka aad rabto in aad hordhaca ah ee kulliyadda. Sida caadiga ah ku kici u dhexeeya 150 Oo 200 dollar.
deggan Text u muuqataa in nuqulo shisheeye si ay u arkaan in degree aan ka dalka aad ka soo jeedo helay waa shahaadada degree mid ah Maraykanka. Tan waxaa badanaa la sameeyaa marka horumarka shaqada. kharashka ku saabsan 400 dollar.
Dhibaatooyinka in nuqulo Rating shisheeye
Mararka qaarkood, waxaa la xiri doonaa jiheysteen dugsiga. Waxa kale oo ay noqon kartaa meel aan amaan ahayn. Labada xaaladoodba, waxa laga yaabaa inaadan awoodin inaad si aad u hesho nuqul ka mid ah dugsiga. Haddii aad isku dayayaan si aad u hesho nuqul ka mid ah shaqada, ka dibna u sharax in Department of Company Resources Human. Haddii ay taasi ayaa waxaa ka go'an in ay dugsiga, la xiriir waaxda ogolaanshaha dugsiga ku saabsan dhibaatadaada.
la sheegay laga yaabaa in aad in aad u baahan tahay casharo dheeraad ah si ay u dhamaystiraan waxbarashada ee dalka Mareykanka. dareen Tani waxay noqon kartaa mid aad u niyad-jab. Xusuusnow in ay jirto sabab for this. Tusaale ahaan, muhandas ee Ciraaq iyo naqshada oo dalka Mareykanka ah u qaban karo shaqo la mid ah. Laakiin waxaa jira nidaamyo kala duwan ee waxbarashada.
Haddii aad qabto wax shaqo ah waxaan ka helay heshiis weyn waxbarashada dalka si aad u buuxin, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan si ay u helaan shahaadada cusub ama helaan casharo dheeraad ah oo ku. Dhakhaatiirta, qareeno iyo macalimiinta u baahan tahay inaad waxaas oo dhan. Waayo, shaqooyin aan u baahnayn shahaado, waxaa laga yaabaa in aadan u baahan shahaado cusub. Waxaad noqon doontaa in ku filan si ay u muujiyaan xirfadaha in aad samayn karto shaqada.
Haddii aad tahay qof wareersan oo ku saabsan natiijada qiimeynta iyo aad rabto in aad si aad u hesho caawimo dheeraad ah, waxaad la xiriiri kartaa shirkadda sameeyay qiimeynta. Waxaad sidoo kale waraysi kartaa la taliyaha dugsiga. Waxay kaa caawin doona inaad akhrido aad qiimeynta iyo wuxuu kuu sheegi doonaa in aad u baahan tahay in fasalo qaaday.
Shirkadaha in qiimeyn lagu koobi shisheeye
Waxaa jira shirkado badan oo online in ay sheegayaan in ay qiimeyso qoraalka. Ka eeg! Qaar ka mid ah tabaha. Waxaad ka heli kartaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ama lacag ayaa kaa qaadin ka hor. Laakiin waxaa jira shirkado daacad waxaad isticmaali kartaa, Adeegyada Waxbarashada Adduunka, Adeegyada Qiimaynta Waxbarashada, Oo Global Aqoonsiga qiimeeyeyaasha Inc..
Search for shaqo
Sidee baan u codsan karaa kulliyadda?